Deg deg: Qaraxyo ka Dhacay Agagaarka Garoonka Muqdisho - iftineducation.com
Deg deg: Qaraxyo ka Dhacay Agagaarka Garoonka Muqdisho
iftineducation.com – Wararka ka imanaya magaalada Muqdishu ayaa sheegaya in laba qarax oo xooggan ay ka dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Muqdisho.
Dad gobjoogayaal ah ayaa sheegaya in labada qarax ay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah. Qaraxa koowaad ayaa ka dhashay baabuur lala eegtay bar kontorool oo ay maamulaan ciidamada amniga Soomaaliya una dhow garoonka diyaaradaha, halka qaraxa labaadna uu ahaa baabuur daba socday kan hore oo isna ku qarxay waddada u dhaxaysa garoonka diyaaradaha iyo Peace Hotel, sida ay dadka deggan xaafaddaasi u sheegeen VOA.
Ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in shan qof ay ku geeriyoodeen qaraxyada. Laba ka mid ah dadkaas waa shacab, halkan qof kalena uu yahay askari ka tirsanaa ciidanka dowladda iyo labadii qof ee qaraxyada fuliyey.
Ciidamada AMISOM ee haya amniga garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa xaqiijiyey labada qarax ee ka dhacay Muqdisho, waxayna sheegeen in baadhitaan uu socdo.
Dadka magaalada ayaa VOA u sheegay in dhowaaqa qaraxyadu ay ahaayeen kuwo aad u culus, islamarkaana ay burburiyeen daaqadaha iyo saqafka guryo goobto ka ag-dhowaa.
Qaab Aad Ugu Galmoon Karto Gabdhaha Siilka Yaryar Iska Fiiri Warbixintaan
Qarax hadda ka dhacay Muqdisho